Jhon Zee — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited December 2009 in Freeware
KeePass Software လေးသုံးကြည့်ရင်အဆင်ပြေမှာပါ။
G-mail & G-talk Auto Type Passwardဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးစွဲသူအကြိုက်ဖြစ်စေမယ်လို့အာမခံပါတယ်။
RamCleaner Goldeneye ရဲ့လျှို့၀ှက်ဆောက်လှမ်းမှု့မှကာကွယ်နိုင်မယ် Cyber Cafe' ဆိုင်တချို့ရဲ့
HD Guard Software ဖြုတ်ချပြစ်နိုင်ပါတယ်။
Web Zip70_setup.exe Software ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ကော်ပီကူးယူနိုင်ပါတယ်။
Freeware နေရာကို Move ထားတယ်။
jhonzee wrote: »
It would be highly appreciated if you could provide the download link.
Pls provide download link if possible.
Hope for your earliest reply.
[email protected] အသေးစိတ်ရေးပို့ပေးစေချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်နော်။ ကိုMKကြီး ပြောချင်တာက Thread အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ဖွင့်ပါလို့ ပြောချင်တာနဲ့တူပါတယ်။ မှားသွားရင် Sorry ပါခင်ဗျား။:)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုYe Htet
အတိုဆုံးပြောရရင်ဗျာ အောက်က link နဲ့ Mz ကိုစ၀င်မယ်ဗျာ....
ပြီးရင် jhonzee လေ့လာချင်တဲ့ Thread ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့အပိုင်း ၊ကိုယ်မေးချင်တဲ့အပိုင်း ရှိရင်တော့ အဲဒီ Thread အောက်ကနေပြီး စမေးပါ။ကိုယ်သိရင်လည်း အဲဒီ Thread အောက်ကနေပြီး စပြီး share ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိချင်တာရော ၊မေးချင်းတာရော မရှိရင် Thread အသစ်ဖွင့်ပြီး စမေးလို့ရပါတယ်။share ပေးလို့ရပါတယ်။
Jhon Zee ဆိုလို့ဘာများလဲလို့ ဒီကတော့ စိတ်ဝင်တစ်စားနဲ့ ဒီဆော့ဝဲနာမည်မကြားဖူးပါဘူးလို့ ဝင်ကြည့်လိုက်တာ လူဖြစ်နေတယ်
Me too,:O:O I thought
Me too,:O I thought it must be software. And very useful for me ):)) anyway
nice to meet you. Welcome to mysteryzillion:6:. I aslo beginner level at IT.